December 7, 2018 - PuraKhabar
December 7, 2018 Purakhabar News
वि.सं. २०७५ मार्गशीर्ष २२ गते शनिबार तदनुसार ई. सं. २०१८ डिसेम्बर ०८ तारिख, विरोधकृत् नामक संवत्सर, शाके :– १९४०, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, ने.सं. :– ११३९, (थिल्लाथ्व), काठमाण्डौ, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०६:४३ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०५:०८ बजे, इटहरी, सुनसरी, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०६:३३ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०५:०२ बजे, पोखरा, कास्की, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०६:५० बजे र सूर्यास्त : साँझ ०५:१२ बजे, मार्गशीर्ष शुक्लपक्षको प्रतिपदा तिथि, दिउँसो ०१:२४ बजेसम्म, त्यसपछि द्वितीया तिथि, मूल नक्षत्र, (अहोरात्र व्याप्त) चन्द्रमा धनु राशिमा (अहोरात्र व्याप्त), शूल योग, बेलुका ०९:४४ बजेसम्म, त्यसपछि गण्ड योग, बब…
भक्तपुरमा आफ्नै स्कुल बसले ठक्कर दिँदा स्कुल छुटेर घर फर्कदै गरेकी सात वर्षीया प्रतिष्ठाको ज्यान गयो
भक्तपुर – स्कुल छुटेर घर फर्कदै गरेकी एक विद्यार्थीको आफँै सवार स्कुल बसले ठक्कर दिँदा मृत्यु भएको छ । भक्तपुर नगरपालिका कमलविनायकस्थित रोम्बस इङ्लिस स्कुलमा कक्षा १ मा अध्ययनरत चाँगुनारायण नगरपालिका–८ रानीबारी सुडालकी सात वर्षीया प्रतिष्ठा खत्रीको उपचारको क्रममा आज मृत्यु भएको महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक रेवतीरमण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । अपरान्ह ४ः३० बजे विद्यार्थी पु¥याउन गएको बा १ क ७२८५ नम्बरको बसले सोही स्कुल बसमा सवार बालिका बसबाट झरेर बाटो काट्ने क्रममा ठक्कर दिएको थियो । घाइते विद्यार्थीको उपचारका लागि मध्यपुर अस्पताल लगिएकामा उपचारकै क्रममा मृत्यु…
सर्पको विष झार्न, जुम्रा मार्न देखि नाकबाट रगत बग्न रोक्न तेजपत्ता [बिधि सहित]
तेजपत्ता पनि घरेलु औषधीले भरिपुर्ण गुण भएको पात हो । यसले माछा, मासुका परिकार स्वादिलो बनाउनको लागि प्रयोगमा ल्याइन्छ । तर यसको औषधीय गुणको बारेमा भने धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । यसले स्वादको मात्र काम नगरेर अचुक औषधीको काम गर्छ । तेजपत्ताका फाइदा यस्ता छन् । १, सर्पको विष झार्छ: सर्पले टोक्ने वित्तिकैको आलो घाउलाई तत्काल निको पार्न तेजपत्ताले औषधिको काम गर्छ । विषालु किराले टोकेर बनेको घाउमा तेजपत्ताको रस प्रयोग गर्दा घाउ ठिक हुन्छ । सर्पले टोकेको ठाउँमा तेजपत्ताको रस लगाउँदा विष झर्छ । तेजपत्ताको तेलमा ‘एन्टी फंगल’ तथा…
भन्दा लाज लाग्ने, नभन्दा समस्या बढ्दै जाने” महिलाका अति संबेदनशील समस्याहरु यस्ता छन्
योनि चिलाउने : यो महिलाहरुमा हुने सामान्य समस्या हो । भन्नपनि लाज लाग्ने, नभन्दा समस्या विकराल बन्दै जाने । यो समस्यामा सेतो पानी बग्ने तथा योनिका भित्ताहरुमा चिलाउने हुन्छ । चूर्णा परे पनि गुह्द्धारबाट सर्दैसर्दै वर आइपुग्छन् र योनि चिलाउने हुन्छ । हर्षा भएमा, न्यूरोसिस र महिनावारी हुनुभन्दा पहिले पनि यौनी चिलाउने गर्छ । गर्भवती अवस्था यस्तो समस्याले बढी नै सताउछ, राती गुम्सिएपछि त कन्याउँदा घाउ पनि हुन्छ । पिसाब मात्र जाँच गरेमा पनि धेरै कुरा पत्ता लाग्छ । यदि कारण पत्ता लागेन भने चिलाउन रोक्ने उपाय अपनाउनु पर्छ ।…
निर्मला हत्याकाण्डमा पक्राउ परेका रावलबाट यस्तो उपलब्धी प्राप्त भयो ! को हुन् रावल ?
काठमाडौं, २१ मंसिर । प्रहरीले निर्मला पन्तका हत्यारानजिक पुगेको दाबी गरेको छ । भीमदत्तनगर नगरपालिका–१८ का १७ वर्षीय प्रदीप रावललाई प्रहरीले मंगलबार पक्राउ गरेको छ । रावल काठमाडौंबाट पक्राउ परेसँगै अनुसन्धान साँघुरिएको प्रहरीले जनाएको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ । ‘यो प्रकरणमा अनुसन्धान न्यारो डाउनतिर गएको छ । शंकास्पदसँग सोधपुछ गर्ने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ’, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘चाँडोभन्दा चाँडो परिणाम निकाल्न जुटेका छौं ।’ बुधबार कञ्चनपुरमा सात जनासँग सोधपुछ गरिएको उनले सुनाए । प्रहरी महानिरीक्षक ९आईजीपी० सर्वेन्द्र खनालले नै रावलको बयान लिएका…
तपाइको X वा पूर्व प्रेमीको बारेमा केटीहरु के सोंच्छन् ?
मानिसहरु भन्छन् पहिलो प्रेम सँधै विशेष हुन्छ । पहिलो प्रेम भुल्न सकिँदैन भन्ने धेरैको भनाइ हुन्छ । चाहे त्यो सफल प्रेम होस वा असफल । तर यसो भन्दैमा पहिलो प्रेममा समस्या नहुने होइन । मानिसहरु पहिलो प्रेममा विछोडको पीडा भोगे पनि जीवनभर केही कुरा जान्न चाहन्छन् । पहिलो प्रेममा परेको मान्छेको विषयमा कतिपय कुरा जान्ने चाहाना सँधै हुन्छ । त्यसैले मानिसहरु पूर्व प्रेमी वा प्रेमिकाको फेसबुक चेक गरिरहन्छन् । भलै फ्रेण्डलिष्टबाट हटिसकेको होस् । पूर्व प्रेमीका बारेमा केटीहरु के सोंच्छन् त ? १ फेसबुक पछिल्लो समयमा फेसबुक नै मानिसहरुको गतिविधी…
भाडामा राखेका युवतीहरुको अश्लिल भिडियो बनाउन बाथरुम सहित अन्य कोठामा ९ क्यामरा !
चेन्नईको अदंबक्कम भन्ने स्थानमा गर्ल्स होस्टलमा लुकाएर क्यामरा राख्ने एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको छ। विभिन्न कोठा र बाथरुममा क्यामरा राखेर भिडियो बनाउने गरेको कारण सम्पत नाम गरेका एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको हो। होस्टलमा बस्ने युवतीहरुले प्रहरीमा सम्पतको कर्तुत बारे उजुरी दिएपछि उनी पक्राउ परेका हुन्। घटनाको पर्दाफास त्यति बेला भयो जब एक युवती नुहाउनको लागि बाथरुम छिरेकी थिइन्। बाथरुममा नुहाउँदै गर्दा बिजुलीको सकेट एक्कासी खस्यो, युवतीले सकेटमा लुकाइएको क्यामरा देखेपछि सम्पतको कर्तुत बाहिरिएको भन्दै भारतीय संचार माध्यमले समाचार लेखेका छन्। तीनवटा कोठामा ६ महिला बस्ने उक्त होस्टल सम्पतले आफू बस्नको…
राजदूत लक्की शेर्पा र उनका चालक वाङछु शेर्पाको भनाइ जस्ताको तस्तै यस्तो छ
श्रीमानले डुबाएका हुन् या आफैं डुबिन् ? मंसिर, काठमाडौं । अष्ट्रेलियामा कार्यरत नेपाली राजदूतको नाम हो – लक्की शेर्पा । अंग्रेजीमा ‘लक्की’को अर्थ ‘भाग्यमानी’ हो । तर, राजदूत लक्कीका लागि अहिले दुर्भाग्यका दिन सुरु भएका छन् । राजदूत लक्कीले विगतमा नेपालबाटै अष्ट्रेलिया ल्याएका निजी चालकसँग लेनदेन लगायतको विवाद चुलिएपछि राजदूत शेर्पालाई फिर्ता बोलाउन नेपाल सरकारलाई चौतर्फी दबाव बढेको छ । यसैवीच परराष्ट्र मन्त्रालयले यो प्रकरणबारे अष्ट्रेलियास्थित नेपाली दूताबाससँग जवाफ माग्दै पत्राचार गरिसकेको छ । अघिल्लो हप्ता एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा अस्ट्रेलियाबाट टेलिफोनमा प्रस्तुत भएका राजदूतका पूर्वसवारी चालक एवं भान्छे वाङछु शेर्पाले…
प्रचण्डको २ बोलि कहिले कपिलबस्तु, कहिले रुपन्देही प्रदेश ५ को राजधानी
प्रदेश ५ को राजधानी रुपन्देहीबाट अन्त सार्न हुदैन :प्रचण्ड नेकपाका अध्यक्ष तथा पुर्व प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज भैरहवामा आयोजित मेलाको उदघाटन गर्दै रुपन्देहीबाट राजधानि सर्न नसक्ने बताउनु भएको छ । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघले आजदेखि भैरहवामा आयोजना गरेको लुम्बिनी राष्ट्रिय महोत्सवको उद्घाटन गर्दै उहाले रुपन्देहीबाट अन्यत्र राजधानि सार्दा समस्या हुन सक्ने बताउनु भयो ।उहाले प्रदेश नम्वर ५को मात्रै नभएर सबै प्रदेशका राजधानि नसर्ने बताउनु भयो । अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो हाल कायम रहेका प्रदेशका राजधानीलाई अन्यत्र सार्दा धैरै समस्या हुने भन्दै निरन्तरता दिने सोच सरकारको छ तर यसको संबैधानिक अधिकार…
काठमाडौं । मुलुकमा उत्पादित मदिरामा टाँस्ने स्टीकरमै करौडौ रुपैयाँ व्यापार भ्रष्टाचार हुने गरेको रहस्य खुलेको छ । मदिरा उद्योगलाई स्टीकर राजश्व विभागले दिनेगर्छ । राजश्वले अन्तशुल्क स्टीकर विदेशी छपाएर ल्याउने गरेको छ । नेपालका छपाई कम्पनीले स्टीकरमा घोटाला गर्न मुलुकमा नछपाएर विदेश लग्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । राजश्वले मदिरा स्टीकर इन्डोनेसियामा छाप्ने गरेको छ । नेपाली कम्पनीले स्टीकरमा व्यापक अनियमिता भएको जनाउँदै संघीय संसद सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी गरेपछि भ्रष्टाचारको पोल खुलेको हो । स्टीकरमा भ्रष्टाचार भएको उजुरी आएपछि समितिले राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानासँग शुक्रबार स्पष्टीकरण लिएको छ ।…